संक्रमित : Loading...
सक्रिय : Loading...
निको : Loading...
मृत्यु : Loading...
Nawalparasi (West) Rukum(East) Bardiya Banke Rolpa Dang Kapilvastu Rupandehi Palpa Arghakhanchi Pyuthan Gulmi Dolpa Jumla Mugu Humla Rukum(West) Jajarkot Kalikot Dailekh Salyan Surkhet Mustang Manang Myagdi Kaski Lamjung Baglung Parbat Syangja Tanahun Nawalparasi(East) Gorkha Kavrepalanchowk Sindhupalchowk Dhading Nuwakot Rasuwa Chitwan Makwanpur Sindhuli Ramechhap Dolakha Lalitpur Kathmandu Bhaktapur Kailali Kanchanpur Doti Achham Dadeldhura Bajura Baitadi Darchula Bajhang Parsa Bara Saptari Rautahat Siraha Mahottari Dhanusha Sarlahi Sunsari Udaypur Morang Jhapa Okhaldhunga Illam Dhankuta Khotang Bhojpur Terathum Taplejung Sankhuwasabha Panchthar Solukhumbu
117850259 2613932 21716825 93519502
29744652 538628 8756390 20449634
11244786 157966 187426 10899394
11055480 266614 1006546 9782320
4342474 89809 320488 3932177
4223232 124566 820037 3278629
3909560 88933 3554531 266096
3160970 71436 278605 2810929
3081368 100103 472533 2508732
2793632 29094 132508 2632030
सबै देशहरुको हेर्नुहोस
Podcast #4 कोभिड-१९का विरामीहरू कसरि व्यवस्थापन गरिन्छ?
अरु पडकास्टहरु सुन्नुहोस
Podcast: #5 RDT vs PCR and quality control for COVID-19 diagnosis
सबै पडकास्टहरु सुन्नुहोस
सबै समाचारहरु पढ्नुहोस
काेराेना भाइरसका लक्षणहरु
श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्य देखा पर्नु ।
गम्भीर अवस्थाहरूमा संक्रमणीत विरामीको मृत्यु समेत हुन सक्दछ ।
संक्रमणबाट जोगिने साधारण उपायहरू
नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धोऔ।
फ्लु जस्तो लक्षण देखिएका डाक्टरसंग परामर्श लिने ।
बाहिर जाँदा मास्कको प्रयोग गरौं ।
आहिलेसम्म कोरोना भाईरसको कुनै पनि उपचार छैन। यदि तपाइलाई आफुलाई यस रोग लागेको संका लागेमा, तुरुन्तै नजिकको अस्पताल जानु होला। जानु अघि मास्क लगाउनुस र राम्ररी हात धुनुहोस। डाक्टरसंग आफ्ना लक्षणहरुको कुरा गर्नुहोस। आफु कहाँ कहाँ गएको, को कोसंग भेटेको कुरा खुलस्तरुपमा भन्नुहोस। डाक्टरहरुले अरुलाई पनि बचाउन सक्छन। डाक्टरको सल्लाह राम्रोसंग सुन्नुहोस र मान्नुहोस। डाक्टरले अस्पतालमा नराखे, निको नभए सम्म घरमा अरुबाट टाडै बस्न्नुहोस। खास गरेर बुढाबुढी, बच्चाहरु र रोगीहरुसंग नभेट्नुस। नआतिनुस, आराम गर्नुस - निकोहुने सम्भावना धेरै नै छ।
काेराेना भाइरसद्धारा संक्रमित माइक्रोबियल एजेन्ट पहिलो पटक चीनको वुहानमा सन् २०१९ काे डिसेम्बरमा रिपोर्ट गरिएको थियो| यो नयाँ प्रजातीको भाइरस हो जुन मानव प्रजातिमा पहिलो पटक देखिएको हो। यस भाइरसले सामान्य रुघाखोकी देखि गम्भीर प्रकारको तीव्र श्वासप्रश्वासको समस्या तथा न्यूमोनियाबाट पनि संक्रमण भई मृगौला विफल भएर विरामीको मृत्यु समेत हुन सक्दछ|
फ्लु जस्तो लक्षण देखिएमा डाक्टरसंग परामर्श लिने ।
अनावस्यक भिड भएको स्थानमा नजाऔं ।
सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका भ्रम फैल्याउने भिडियोहरु
भ्रम: यदि मैले १० सेकेन्ड सम्म खोकी नखाईकन मेरो सास समात्न सक्दछु, यसको मतलब के मसँग कोरोनाभाइरस छैन (COVID-19)?
यथार्थ: होईन १० सेकेन्ड वा सो भन्दा बढीको लागि सास रोक्न सक्षम हुनु भनेको खँसी वा अप्ठ्यारो महसुस नगरेमा यसको मतलब यो होइन कि तपाईं कोरोनाभाइरसबाट स्वतन्त्र हुनुहुन्छ (COVID-19) वा कुनै अन्य फोक्सोको रोगबाट।
भ्रम: कीटाणुनाशक औषधी शरीरमा छार्किनाले कोरोनाभाइरस बाट बच्न सकिन्छा ।
यथार्थ: होइन। कुनै हालतमा पनि शरीरमा कीटाणुनाशक औषधी छर्किनु हुदैन। कीटाणुनाशक औषधी यदि शरीर भित्र छिरेमा घातक हुन सक्छ। यसले आँखा र छालामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। कीटाणुनाशक औषधी जमिन र अरु सतहमा मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ। कीटाणुनाशक औषधीहरु केटाकेटीले नभेट्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ।
भ्रम: न्यून÷उच्च रक्तचाप (लो वा हाई ब्लप्रेसर) कोभिड–१९ को लक्षण हुनसक्छ ।
यथार्थ: कोभिड–१९ को सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरू भनेको ज्वरो, थकान र सुक्खा खोकी हुन् । केही विरामीहरूलाई शरीर÷जीउ दुख्ने, नाक बन्द हुने, सिगान बग्ने, घाँटी खराब हुने वा पखाला लाग्ने पनि हुनसक्छन् । यी लक्षणहरू प्रायः हलुका हुने र क्रमशः बढ्दै जानेगर्छन् । केही व्यक्तिहरू संक्रमित भएपनि उनीहरूमा कुनै पनि लक्षण देखापर्दैन् र विरामी पनि हुँदैनन् । अधिकांश व्यक्ति (करिव ८० %) यस रोगबाट कुनै पनि विशेष उपचार विना नै निको हुन्छन् । कोभिड–१९ रोग लाग्ने हरेक ६ जनामध्ये एकजना गम्भीर विरामी पर्ने गर्छन् र स्वासप्रश्वास (सास फेर्न) कठिन हुनजान्छ । वृद्धवृद्धा र पहिला नै उच्च रक्तचाप, मुटुको समस्या वा मधुमेहजस्ता स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूमा यो रोग गम्भीर भएर जाने सम्भावना बढी हुन्छ । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र सास फेर्न कठिन भएको अवस्थामा चिकित्सीय सल्लाह लिनुपर्छ ।
सबै भ्रमहरु पढ्नुहोस